नेपालको सीमाना मिचेर दशगजा क्षेत्रमा भारतीयले बनाएका अ’वैध संरचना हटाउने काम शुरु ! [ सक्दो सेयर गरौँ ] – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालको सीमाना मिचेर दशगजा क्षेत्रमा भारतीयले बनाएका अ’वैध संरचना हटाउने काम शुरु ! [ सक्दो सेयर गरौँ ]
नेपालको सीमाना मिचेर दशगजा क्षेत्रमा भारतीयले बनाएका अ’वैध संरचना हटाउने काम शुरु ! [ सक्दो सेयर गरौँ ]
११ पुस, रौतहट । नेपाल भारतको सीमाको दशगजा क्षेत्र बनाइएका संरचनाहरु हटाउन सुरु गरेको छ । नेपाल र भारत दुवै पक्षका सुरक्षाकर्मीको संयुक्त पहलमा दशगजा क्षेत्रमा बनाइएका गाईगोठ, घरटहरा, पसल तथा बजार हटाउन थालेको हो ।
रौतहटको पश्चिमी सीमा क्षेत्रबाट सुरु भएको अभियान सरमुजवासम्म पुगेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ११ नम्बर गणले जनाएको छ ।
दश गजाको अधिकांश भूभागलाई दुवै तर्फका स्थानीयवासीले निजी कामका लागि प्रयोग गर्दै आएका थिए । जंगे, मझौला तथा साना पिल्लरहरुलाई समेत नोक्सानी पुग्ने गरी बनाइएका घरगोठका कारण कतिपय स्थानमा सीमा स्तम्भ खोज्न मुस्किल हुने गरेको थियो । भारतीय नागरिकहरुले दशगजामा रहेका भूभागलाई खेतका रुपमा समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
दशगजा क्षेत्रमा अवैध रुपले बनाइएका भौतिक संरचनाहरु हटाउने र सीमा क्षेत्र स्पष्ट रुपले बुझिने गरी राख्ने उद्देश्यका साथ अतिक्रमण हटाउने काम सुरु भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ११ नम्बर गणका उपरिक्षक रविन राज कर्णजितले बताए ।
नेपालले गोर्खा पल्टनमा अब नेपाली युवा नपठाउने निर्णय गर्न लाग्यो भन्दै भारतीय मिडियामा फेरी हलहल (भिडियो हेर्नुस्)